Boolis Kale oo Lagu Dilay Dalka Maraykanka, iyadoo Mid kalena la Dhaawacay (VIDEO) - Hablaha Media Network
Boolis Kale oo Lagu Dilay Dalka Maraykanka, iyadoo Mid kalena la Dhaawacay (VIDEO)
HMN:- Askari katirsanaa Booliska Magaalada San Diego ee Gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa waxaa la dilay 11-kii habeenimo, iyadoo mid kalana halkaasi lagu dhaawacay.
Gaari ay la socdeen Saraakiishan oo ahaa kuwa qaabilsan inay la dagaalamaan gaangiska ayaa ku hakaday goob ay ka raadinayeen rag gaangis ah, waxaana kadib lagu furay rasaas, taasoo sababtay dhimashada Sarkaalka iyo dhaawaca midka kale.
Taliyaha Ciidanka Booliska Magaalada San Diego, haweeneyda lagu magacaabo Shirley Zimmerman, ayaa waxay xaqiijisay in toogasho lagu dilay hal Sarkaal, halka mid kalana lagu dhaawacay goobtaasi oo loola cararay isbitaalka.
Booliska magaalada San Diego, ayaa hal qof u soo qabtay toogashada ka dhacday Magaaladaasi, iyadoo mid kalana la soo sheegaayo in ay ku raadjooggaan.
Saraakiisha Booliska, ayaa waxay saakay hawlgal la xiriira toogashada ay ka sameeyeen goobtii uu falku ka dhacay.
Duqa Magaalada San Diego, Kevin Faulconer oo ka hadlay dhacdadan, ayaa sheegay weerarada ka dhanka ah Saraakiisha Booliska uu yahay mid lagu soo qaaday dhammaanba shacabka Mareykanka.